अत्यावश्यक सेवाका नाममा बुर्तिबाङ खुल्न थाले सबै पसल, अनुगमन तथा नियमन फितलो - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ बैशाख ३०, बिहीबार १२:२१
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बागलुङ जिल्लाभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ र स्थानीय पालिकाद्धारा निशेधाज्ञा जारि गरिएको छ । तर बागलुङ पश्चिमको ढोरपाटन नगरपलिकामा खुकुलो बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले निशेधाज्ञा जारि गर्दै, नागरिकका लागि अत्यावश्यक सेवा दिन खोल्नुपर्ने भनिएका खाद्यन्न, तरकारी, मासु, औषधि र पानीको विक्रीवितरण गरिने पसल बाहेक सबै बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त निर्देशनलाई ढोरपाटन नगरको बुर्तिबाङ बजारमा उल्लंघन गरिएको देखिएको छ ।
अत्यावश्यक भनिएका पसलहरु हरेक दिन विहान ७ वजेदेखि १० वजेसम्म खुल्ला गरिने भनिएपनि, यहाँ स्थित हार्डवेरका पसल, इलेक्टोनिक्स सामान बेच्ने पसल, फेन्सि पसल लगायतका सानातिना पसलेहरुले खुलेआम पसल खुल्ला गरेका छन् । यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा रोक लगाइने आदेशमा भएपनि सवारी साधनहरु खुलेआम सवारी ओसार पसार गरिरहेका छन् ।
स्मरणीय छ, ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा केही दिन अघि भएको ट्याक्सी दुर्घटना र त्यसमा सवार एक जना प्यासेन्जर तथा सवारी चालकको मृत्यु निशेधाज्ञा उल्लंघन गरिएकै अवस्थामा भएको हो । अझैपनि बजार क्षेत्रमा जीप, ट्याक्सी, लोकल बस, मालसामान ढुवानी गर्ने ट्याक्टर, ट्रक तथा पिकअपहरुमा मानिसहरुको ओहोर दोहोर भइरहेको छ ।
यसरी खुलेआम रुपमा भइरहेको आवतजावतमा नागरिक तहबाटै निशेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने बढी देखिएको छ । बैंकहरु खुल्ला गर्ने नगरपालिकाको निर्णयपछि, बैंकमा एकजनाको काम हुन्छ, त्यसका पछि दुई तीन जना अरु मान्छेहरु यत्तिकै आउने गरेका बैंकका कर्मचारीले बताउँछन् ।
सडकमा मास्क समेत प्रयोग नगरी हिंड्ने नागरिकहरु अझ धेरैभएको प्रहरीको भनाई छ । ‘हामीले मास्क लगाउन, अनावश्यक घरबाहिर ननिस्कन र कोरोना महामारीका कुरा भन्छौं, सुन्ने कसैले होइन एक प्रहरी जवानले भन्छन् । अली खुल्ला जस्तो भयो वा यो ओहोर दोहोरलाई टाईट गर्न सकिएन मान्छेहरु अनावश्यक हिंड्नेहरुनै बढी छन् । नागरिकहरुको अटेरीले संक्रमण रोकिने देखिन्न । ’
खासगरी बुर्तिबाङ बजार र ढोरपाटन नगरपालिकामा निशेधाज्ञाको कार्यान्वयन बढी फतलो देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा आएका मेडिकलहरुले समेत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दैनन् ।
खास गरि मेडिकल सञ्चालकहरु, कोरोनाको यस्तो महामारीमा कुनै वास्ता नै नगरी महामारीमा सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको विरामीहरुले बताएका छन् । बुर्तिबङ स्थित एक मेडिकलमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी हुन वा को हुन, अनुहारमा मास्क लगाएका छन् । विरामीहरुको भिडभाड गराउने, भिडभाडमै जाँच्ने, कोरोना केही होईन भनिदिने, यस्तो दुर्दशा आफूलाई राम्रो नलागेको मेडिकलमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
‘स्थानीय निकाय पनि कस्तो होला, बजार अन्धाधुन्धा चलेकै रहेछन् । स्वास्थ्य सेवा दिने मेडिकलहरु मनपरि गरिरहेका छन् । हेर्ने, सुझाव दिने, गलत गरे कार्वाही गर्नुपर्ने, यस्तो पनि कस्तो स्थानीय निकाय ? उनै स्वास्थ्य सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यस्तो बताए ।